Hello Nepal News » स्वारेजको स्थानमा डिपे भित्र्याउन बार्सिलोना सहमत : मूल्य कति ?
स्वारेजको स्थानमा डिपे भित्र्याउन बार्सिलोना सहमत : मूल्य कति ?
स्पेनिस फुटबल क्लब बार्सिलोनाले फ्रेन्च क्लब लियोनका कप्तानसमेत रहेका फरवार्ड मेम्फिस डिपे भित्र्याउन सहमत भएको छ । स्पेनिस मिडियाका अनुसार क्याटलान क्लब नेदरल्यान्ड्सका २६ वर्षीय फरवार्डलाई उरुग्वेन फरवार्ड लुइस स्वारेजको स्थानमा भित्र्याउन लागेको हो ।
डिपेका लागि बार्सिलोनाले लियोनलाई २२ मिलियन पाउन्ड सरुवा फि तिर्न तयार भएको खबर छ । बार्सिलोनाका नयाँ प्रशिक्षक रोनाल्ड कोएमानले नदरल्यान्ड्सको टोलीमा यसअघि आफूसँगै काम गरेका खेलाडी भित्र्याउन जोड गरेपछि बार्सिलोना डिपेका लागि तयार भएको बताइएको छ । बार्सिलोना आउनुअघि कोएमानले राष्ट्रिय टोलीमा डिपेलाई प्रशिक्षण दिन्थे ।
आफ्नै देशका खेलाडी डिपेलाई कोएमानले स्वारेजको विकल्पमा प्रयोग गर्ने योजना बनाएका छन् । यदि बार्सिलानाले डिपे भित्र्याए इटालियन इन्टर मिलानका लौटारो मार्टिनेजको अनुबन्ध तत्कालका लागि हुनेछनै । डिपे अनुबन्ध भएको खण्डमा बार्सिलोनामा नयाँ सिजनमा फ्रन्ट लाइनमा कप्तान लिओनल मेस्सी, एन्टोनी ग्रीजम्यान, डिपे, अन्सु फाती, मार्टिन ब्रेथवेटसहितका खेलाडी हुनेछन् ।
प्रकाशित मिति २२ भाद्र २०७७, सोमबार १५:४५